အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Nokia က iOS အတွက်၎င်း၏ဒီမှာမြေပုံများနှင့်အညွှန်း app ကို relaunches” စတူးဝပ်သောင်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 11 မတ်လအပေါ်များအတွက် 2015 13.04 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Nokia က iOS အတွက်၎င်း၏ဒီမှာမြေပုံများနှင့်အညွှန်းလျှောက်လွှာ relaunching ဖြစ်ပါတယ်, ကို Android ဗားရှင်း4သန်းတန် downloads, တက် notching ပြီးနောက်, သောအောက်တိုဘာလတွင်စတင် 2014.
Android ပေါ်မှာအဖြစ်, အက iOS app ကို ယနေ့အကြာတွင်မိတ်ဆက်လာသောအခါကို download လုပ်ပါနဲ့သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျ (11 မတ်လ), ၎င်း၏အဓိကသော့ချက်အရောင်းရဆုံးနှင့်အတူအဘို့အမြေပုံတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့က၎င်း၏စွမ်းရည်ထောက်ပြ 118 အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုမှုအတွက်စက်ပစ္စည်းတွင်နိုင်ငံပေါင်း, မိုဘိုင်းကွန်ရက်ဒေတာကိုစွဲချက်အပေါ်ချွေ.
Google Maps ကိုတစ်ဦးပြိုင်ဘက်အဖြစ်နေရာယူထား - နှင့် iOS ပေါ်မှာ, ထိုကြိုတင် Apple မြေပုံ Application ကို - ဒီမှာလည်းယာဉ်မောင်းများအတွက်အော့ဖ်လိုင်းအလှည့်-by-​​အလှည့်အညွှန်း features တွေကိုလည်းပါဝင်သည်, လမ်းသွားလမ်းလာများအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းညွန်, လာသောအခါအွန်လိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသွားအလာဒေတာအတွက်ဆွဲထုတ်ဖို့နဲ့စွမ်းရည်.
ဒီမှာမူလကရှိထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် 2012, ကနဦးက Nokia ရဲ့ကိုယ်ပိုင်က Windows Phone စမတ်ဖုန်းသီးသန့် app ကိုအဖြစ်, Android နဲ့ iOS ကိုမှချဲ့ထွင်ဖို့အစီအစဉ်ကိုအစမှအကြောင်းစကားပြောခဲ့ပေမယ့်.
Related: ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပုံအက်ကြောင်း: ဘာ '' geoweb’ စစ်မှန်သောလမ်းများပေါ်တွင်အကြောင်းမှားရရှိသွားတဲ့
တကယ်ပါပဲ, ဒီမှာခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလထဲမှာဇာတိက iOS app ကိုအဖြစ်ဖြန့်ချိ 2012, ဒီဇင်ဘာလ၌ Apple ရဲ့ App Store ကိုမှဖယ်ရှားပစ်မခံရမီ 2013 ကုမ္ပဏီ၏ယုံကြည်ချက်ရန်ကြောင့် - တစ်ဦး၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့စကားအတွက် - iOS ကိုရန် "မကြာသေးခင်ကအပြောင်းအလဲများ7"အသုံးပြုသူအတှေ့အကွုံကိုထိခိုက်စေ.
ဒီ app ကတည်းကရှိပါတယ် Samsung ရဲ့ Galaxy-branded Android စမတ်ဖုန်းများအတွက်စတင် သြဂုတ်လထဲမှာ 2014, တစ်ဦး beta ကိုဗားရှင်းမပြုမီ အဓိကက Google အတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသွားလေ၏က Android app store ကို Play ဒီဇင်ဘာ.
ဒီ app ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် beta ကိုမှထွက်လာသော 2015, ကပိုထက်3မီတာကြိမ် download လုပ်ခဲ့ထောက်ပြမှာ, Nokia ကက ထိုအချိန်မှစ. ထိုလတွင်အခြား 1 မိနစ်ကို Android downloads, ဆက်ပြောသည်သောဂါးဒီးယန်းကပြောပါတယ်ပေမယ့်.
iOS ကိုကစုစုပေါင်းမှသိသိသာသာတိုးတက်မှုများကိုဖွယ်ရှိသည်, Nokia ကရောက်ရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပင်လျှင် 10အကို standalone Google Maps ကို App ကအောင်မြင်နှစ်ရက်အတွက်မီတာ downloads, ဒီဇင်ဘာလ၌ iOS အတွက်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက် 2012, Apple ကသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပေါ်ကြိုတင်ဗားရှင်းကိုဖယ်ရှားခဲ့အဲ့ဒီနောက်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ.
ဧပြီလထဲမှာ 2014, Microsoft က Nokia ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝယ်, ကုမ္ပဏီဒီမှာကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူသီးခြားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဖင်လန်အတွက်ကျန်ရစ်.
စားသုံးသူ app ကို download လုပ်ပါနဲ့သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, Nokia က၎င်း၏ဒေတာအတွက်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်များအားဖြင့်ဒီမှာကနေပိုက်ဆံစေသည် - မော်တော်ကားတပ်ဆင်ဂြိုဟ်တုအညွှန်းစနစ်များအတွက်ဥပမာ, အဖြစ်ကောင်းစွာ Microsoft ကမှအဖြစ်.